Musharaxiinta: Ha siyaasadeynin walwalka
By axadle	 On Jan 20, 2021
Midowga Musharaxiinta Hogaamiyaha Soomaaliya 2021 ayaa kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho iyagoo ka hadlay Amniga, Doorashooyinka, Xaalada Gobolka Bakool & Walaaca Waalidiinta maqan.
Musharax Ridwaan Xirsi Maxamed oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in dhalinyarada la la’yahay, tabashada waalidiinta iyo jawaabta dowlada ay ka leeyihiin arrimo siyaasadeed.
Ridwaan wuxuu qaaday talaabo dhab ah oo ku wajahan walwalka iyo cabashooyinka waalidiinta dhallinta yar ee ay Dowladda Federaalka la xiriirtay maalmihii la soo dhaafay si ay uga codsadaan inay helaan macluumaadka carruurtooda.
Ma sahlana in la dhaho tirada badan ee dhalinyarada, waalidkood wax war ah ma hayaan, waxay si joogto ah uga hadlayaan warbaahinta, baraha bulshada & banaanbaxyada si ay u helaan jawaabta ay u baahan yihiin, macluumaadka dhalinyarada ee maqan. Sidaasi ayuu yidhi Ridwaan Xirsi.
Afhayeen u hadlay Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay in heshiiska ku saabsan tababarka ciidamada uu yahay mid sharci ah loona diri doono dalka lana soo bandhigi doono marka ay soo laabtaan, sidaa darteed dowladda Federaalka waxay ka walaacsan tahay waalidiinta dhalay dhalinyarada la la’yahay kadib markii wasiirka warfaafinta uu ka gaabsaday inuu ka hadlo. in Ereteriya la qaatay sida uu hadalka u dhigay.
Tababarka ciidamada waa arin sharciga iyo kala dambeynta ah, heshiisyada lala galo dowladaha tababaraya ciidamadeena markay baxayaan ama soo baxayaan waxaa laga qorayaa warbaahinta. ”Waxay ka walwalsan tahay waalidkeed maadaama aysan garaneyn halka ay joogaan. la qaadayo. “ Ayuu yidhi Afhayeen Ridwaan.
Qaar ka mid ah waalidiinta dhalay dhalinyaradaas ayaa Axadle u sheegay inay heleen xog ku saabsan inay ka qeyb qaateen dagaalkii u dhaxeeyay dowladda Federaalka Itoobiya iyo ismaamulka Tigray, in kasta oo uu taas beeniyay wasiir Cismaan Abuukar Dubbe.
axadle 9045 posts
UN envoy to seek advice from Northeastern State following election stalemate
PSG ayaa soo bandhigtay saxiixa Lionel Messi